Brexit: MPs to vote on no-deal after rejecting May’s plans | allsaaxo online
Published on March 13, 2019 by said · No Comments
Xildhibaanada ayaa dib u codeyn doona haddi ay joojinayaan UK in ay ka baxaan EU-da iyada oo aan heshiis la gaarin, ka dib markii ay si adag u diideen heshiiskii Theresa May.
Heshiiska ayaa lagu jabiyay Habeenkii Talaadada 149 cod.
Xukuumaddu waxay soo saari doontaa talooyin loogu talagalay ganacsiyada canshuuraha iyo soo jeedinta xudduudaha Irish haddii ay dhacdo in wax heshiis ah lagamamaarmin aroortii Arbacada. Golaha wasiiradu waxay la kulmayaan 08:00 GMT.
Midowga Yurub ayaa sheegay in qorshe heshiis ah uusan “ka sii muhiimsaneyn weligiis” ka dib guuldaradii.
Hogaamiyaasha Midowga yurub ayaa muujiyay naxdintooda ka dib markii ay xildhibaannadu u codeeyeen 391 ilaa 242 cod si ay u diidaan heshiiska Mrs May.
Taas macnaheedu waa Xildhibaanada Toryaalku waxay codkooda u dhiiban karaan damiirkooda halkii ay raaci lahaayeen amarrada hogaamiyayaasha xisbiyada – dhaqdhaqaaq aan caadi aheyn oo loogu talagalay codeynta siyaasad weyn.
Mooshinkan wuxuu yiri: “Gurigani wuxuu hoos u dhigayaa in uu ogolaado in uu ka tago Midowga Yurub iyada oo aan heshiis laga saarin iyo qaabka xiriirka mustaqbalka ee 29-ka Maarso.”
Haddii aan la diidin heshiiska, Xildhibaanada ayaa codeyn doona khamiista iyagoo dib u dhigaya Brexit iyagoo sii maraya Qodobka 50 – qaabka sharci ee UK ka qaadaya EU.
Midowga Yurub wuxuu sheegay inuu u baahan yahay “xaqsoor macquul ah” ka hor inta uusan ogolaanin kordhin kasta.
Ka tagista Midowga Yurub muddo 16 cisho ah ayaa weli ah waddanka Boqortooyada Midowgay ee sharciga ah.
Miyay MP ka codsadeen ama ka soo horjeesteen Heshiiska Brexit 12 Maarso?
Ku qor lambarka boostada, ama magaca ama qaybaha xildhibaannadaada
Maalinta Talaadada, Hoggaamiyaha Xisbiga Shaqaalaha Jeremy Corbyn ayaa sheegay in Mrs May ay hadda tahay inay wacdo doorasho guud.
Waxa uu ku baaqay in aan heshiis la gaarin “laga saaro miiska” – oo uu sheegay in Shaqaaluhu sii wadi doono inuu ku riixo soo jeedinnada kale ee Brexit.
Laakiin ma uusan xusin ballanqaadkiisa xisbigiisa si uu dib ugu soo celiyo afti kale.
Ganacsiga ‘Caqli galiyay’ ka dib markii uu Brexit codeeyay
Sturgeon: ‘Dadku waa inay go’aansadaan’
Ra’isal wasaaraha ayaa ka codsaday xildhibaanada in ay dib u celiyaan heshiiskan kadib markii ay xaqiijisey sharciyo qaanuun ah oo ku saabsan Irish dib u soo celinta siyaasadda caymiska si loo joojiyo xadka adag ee jasiiradda Irland – laga bilaabo wadahadalka habeenkii dambe ee Strasbourg Isniintii.
Waa maxay dhabarka?
Laakiin inkastoo ay ku guulaysatay inay ku qanciso ilaa 40 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka si ay u beddelaan maskaxdooda, ma ahan ku dhawaad ​​ku filan inay ku soo rogaan taariikhda 230-ta guulood ee doorashada oo ay ku dhacday jimcihii.
Isagoo ka hadlaya ka dib guuldaradii iyo codkeeda oo la halgamay, ayay tidhi: “Waxaan sii wadi doonaa inaan rumaysanahay in ilaa hadda natiijada ugu fiican ay tahay UK inay ka tagto Midowga Yurub si habboon oo heshiis ah.
“Iyo in heshiiskii aan wadahadleynay ay tahay midka ugu wanaagsan oo kaliya ee la heli karo.”
Mrs May ayaa sheegay in xildhibaannada ay tahay inay go’aan ka gaaraan haddii ay doonayaan inay dib u dhigaan Brexit, inay qabtaan afti kale, ama haddii ay doonayaan inay ka baxaan heshiis balse aysan aheyn heshiiskaan.
Waxay u sheegi doontaa xildhibaanada haddii ay u codeyn doonto heshiiska ama maaha marka ay furto doodda Arbacada.
Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo dib loo dhigay si uu ugu codeeyo heshiiska Brexit
Waraaqaha: Jilicsanaanta ‘iyo’ nacaska ‘
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in aysan ka wada hadlin iscasilaadda kadib markii guul darradeedii ugu dambeysay sababtoo ah dowlad ay hogaaminaysay ayaa dhowaan ku guuleysatay kalsooni kalsoonida wadaxaajoodka.
Waxay haysaa qorshe ah inay dib ugu soo noqoto Brussels si ay u waydiisato heshiisyo dheeraad ah, ayay raaciyeen.
Golaha Wasiirradu waxay u kala qaybsanaayeen tallaabada xigta
Waxa aan caddeyn waa sida ra’iisul-wasaaraha dhab ahaantii uu doonayo inuu naftiisa ka qodo banaantan siyaasadeed ee naxdinta leh.
Qaar ka mid ah jalayaasheeda ku hareereysan miisaaniyadda wasaaradda waxay qabaan in ay muujinayso in ay tahay in ay wax ka qabato heshiiska EU-da.
Qaar ka mid ah waxay rumaysan yihiin in waqtigu hadda yahay in la tago jahwareerka-yaqaanka ah si uu u baxo iyada oo aan la isku afgaran wax heshiis ah, laakiin wuxuu u guuraa inuu diyaariyo inta ugu badan ee suurtagal ah, oo dhakhso ah.
Wasiirada kale waxay rumaysan yihiin dhab ahaan, wali wakhti qiyaastii laba asbuuc oo ay tagaan, iyo shirwaynaha EU-da toddobaadka soo socda, waxaa weli jira wakhti ay isku dayaan in ay ku dhaqaajiyaan heshiiskeeda.